के तपाईं यी एसईओ प्रश्नहरू सोध्न डराउनुहुन्छ? यहाँ उत्तरहरू छन् — HostingSewa Blog
के तपाईं यी एसईओ प्रश्नहरू सोध्न डराउनुहुन्छ? यहाँ उत्तरहरू छन्
September 24, 2020 SEO Tips, Web Hosting
मार्केटिंगको पहिलो चरण लिँदा, म विश्वस्त थिए कि म SEO लाई राम्रोसँग चिन्छु। वास्तवमा सबैले उस्तै तरीकाले सोच्दछन्। केवल यसको पूर्ण फार्म खोज ईन्जिन अनुकूलन जान्नु पर्याप्त छैन। साथै, तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ कि SEO ले तपाईंको वेबसाइट ईन्जिनमा खोजी ईन्जिनमा मुख्य भूमिका खेल्दछ। के यसको मतलब तपाईलाई एसईओ प्रतिभाको मतलब हो?
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईलाई सचेत नहुन सक्छ र तपाईसँग अधिक र अधिक प्रश्नहरू सोधेर सिक्ने मौका छ।
त्यसोभए SEO को सबै कुरा जाँच्नुहोस् केवल म मात्र तपाई र तपाईसँग पनि बास बस्न सक्छ, तर कसलाई सोध्नु पर्छ भन्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न।
आशा छ कि यसले तपाईंलाई पनि मद्दत गर्दछ, यदि तपाईं मसँग यस्तै संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ कि यी कुनै पनि प्रश्नहरूसँग जुन धेरै साधारण छ, तर अझै पनि तपाईलाई अलमल्लमा पार्नुहुन्छ।
एसईओ को बारेमा प्रश्नहरूको सूची जुन तपाईं सोध्न डराउनुहुन्छ
१. एसईओ भनेको के हो?
२. जैविक र भुक्तान परिणामहरू बीच के भिन्नता छ?
३. मेटा विवरण के हो र यसले अझै फरक पार्दछ?
४. के तपाइँको डोमेन नामलाई कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्न अनुकूलन गर्नु आवश्यक छ?
५. कसरी पत्ता लगाउने यदि तपाइँ पृष्ठमा सहि संख्याको कुञ्जीशब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
६. के आन्तरिक र भित्री लिंकहरू फरक छन्?
७. सामग्रीको प्रत्येक पृष्ठमा कति आन्तरिक लिंकहरू हुनुपर्दछ?
८. कति पटक मैले SEO को लागी आफ्नो लिंकहरु अपडेट गर्नु पर्छ?
९. SEO मा हाइपरलिंक्स र ब्याकलिंक्स के हुन्? के फरक छ?
१०. “कहाँ छ?” मेरो किबोर्डमा?
११. मलाई एसईओ गर्न कोडि know थाहा छ?
१२. Robots भनेको के हो?
१३. साइटम्याप.एक्सएमएल (sitemap xml) फाइल के हो?
१४. अनुक्रमित र क्रलिंग बीच के भिन्नता छ?
१५. कुन पृष्ठहरू अनुक्रमित छन् भनेर कसरी पत्ता लगाउने?
१६. किन तपाईको छविहरू (Images) मा Alt टेक्स्ट (alternative text) हुनु आवश्यक छ?
१७. SEO बाट परिणामहरू हेर्नको लागि कति आवश्यक छ?
१८. के मेरो एसईओ गर्न कसैलाई भाँडामा लिन आवश्यक छ?
१९. तपाइँ तपाइँको एसईओ को लागी के लक्ष्य सेट गर्नु पर्छ?
२०. के केहि बर्षमा एसईओ परिवर्तन भएको छ?
SEO भनेको खोज इन्जिन अप्टिमाइजेसन हो। यसमा प्रविधिहरू समावेश छन् जुन तपाईंको वेबसाईटलाई गुगल, बिंग, र याहू जस्ता खोज ईन्जिनहरू मार्फत तपाईंको उत्पाद, ब्रान्ड, वा सेवा खोज्नेहरूका लागि जैविक खोजी परिणामहरूमा बढी दृश्यता प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ।
परिणामहरू जुन खोज इञ्जिनहरूमा प्रदर्शित गरिन्छ एल्गोरिथ्मको लागि नि: शुल्कको लागि जैविक परिणामहरू भनिन्छ। खोज परिणामहरू जुन पृष्ठको शीर्षमा प्रदर्शित हुन्छन् अकार्बनिक खोज परिणामहरू भनिन्छ। विज्ञापनदाताहरु यी लि for्कहरूको लागि बिभिन्न खोज इञ्जिनहरूमा प्रदर्शित हुनको लागि भुक्तान गर्छन्।
एक मेटा विवरण टेक्स्ट हो जुन तपाइँको पृष्ठको तल खोजी ईन्जिन परिणाममा प्रदर्शित हुन्छ जुन तपाइँलाई पृष्ठ सबै के हो भनेर बताउँछ। तल हाइलाइट गरिएको उदाहरण जाँच गर्नुहोस्:
मेटा विवरण आज पनि फरक पार्दछ, यद्यपि तिनीहरू पहिले गरे जस्तो थिएन। पहिले, ती कुञ्जीशब्द अप्टिमाइजेसनको लागि प्रयोग गरियो ताकि क्रोलरहरूलाई तपाईंको पृष्ठ सामग्रीहरूको बारेमा विवरणहरूमा थाहा हुनेछ। अब, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं मनपर्दो कुरा लेख्नुहुन्छ जुन पाठकहरूलाई क्लिक गर्न आकर्षित गर्दछ र तपाईं SERP परिणामबाट तपाईंको वेबसाइटमा रूपान्तरण दरहरू सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको प्राथमिक डोमेनमा कुञ्जी शव्द समावेश नगर्नुहोस् केवल किवर्ड अप्टिमाइजेसनको खातिर किनभने यसले वास्तवमा तपाइँको एसईओ लाई चोट पुर्‍याउन सक्छ। तपाईंको कम्पनीको नाम समावेश गर्न यो ठीक छ, तर यसलाई यति लामो बनाउनुहोस् – डिजिटलमार्केटिंग्सफ्टवेयरब्लॉगिंगसेओसियल मैलाओटोमेसन.कॉम। आशा छ तपाईंले मेरो कुरा बुझ्नुभयो।
माफ गर्नुहोस्, नम्बर पृष्ठमा कुञ्जी शब्दहरूको “सही” संख्याको रूपमा परिभाषित गर्न सकिँदैन। यो किनभने कीवर्ड अप्टिमाइजेसन गर्ने गलत तरीका हो।
कीवर्ड घनत्वको बारेमा नसोच्नुहोस्। यदि तपाईंले धेरै पटक कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाईंको वेबसाइटलाई “कीवर्ड स्टफिंग” को लागी दण्ड दिइनेछ। कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्दा पाठकलाई दिमागमा राख्दै स्वाभाविक रूपमा घुसाउनुहोस्। तपाईं स्वचालित रूपमा कुञ्जी शब्दहरू समावेश गर्नुहुनेछ जब तपाईं आफैं सामग्री मार्फत पाठकको रूपमा जानुहुन्छ। त्यसो भए, कुनै खास संख्यामा पुग्न चिन्ता गर्न रोक्नुहोस्।
तपाइँको वेबसाइट को पृष्ठ मा लिंकहरु जसले तपाइँको साइटको अर्को पृष्ठमा आगन्तुक लिन्छन्लाई आन्तरिक लिंकहरू भनिन्छ। अन्य सामग्रीहरू जुन तपाईंको सामग्रीसँग लि link्क हुन्छन् तिनीहरूलाई इनबाउन्ड लिंकहरू भनिन्छ। तपाईलाई दुबै SEO को लागी आवाश्यक छ।
तपाईंको सामग्रीमा कीवर्ड स्टफिंग बेवास्ता गर्ने समान, तपाईंको सामग्रीमा धेरै लिंकहरू भरिनुहोस्। केवल तपाइँको पाठकको अनुभव सुधार गर्न तिनीहरूलाई समावेश गर्नुहोस्।
सम्बन्धित: आन्तरिक लिinking्कको सात आज्ञाहरू जसले सामग्री मार्केटिंग SEO सुधार गर्दछ
के तपाइँ एक भन्दा बढि काम गर्न चाहानुहुन्छ? कसैले गर्दैन। एकचोटि तपाईंले लिंक सिर्जना गर्नुभयो भने, यो अन्त हुँदैन। तपाईंले आफ्नो वेबसाइट ट्राफिक बृद्धि गर्न यसमा बारम्बार पुन: अवलोकन गर्नु आवश्यक छ। यद्यपि इन्टरनेट को लागी केहि समय को लागी गरीएको छ, हामी जान्दछौं कि लि links्क राम्रो उमेरको छैन।
यदि कसैले पुरानो साइटलाई दोहोर्याइएको छ भने उनीहरूलाई मनपर्दछ कि लिंकहरू उमेर राम्रो हुँदैन। साथै, यदि पुरानो साइट त्यस समयमा परिष्कृत र चिल्लो विकल्प देखिन्छ भने पछि यो clunky र अनावश्यक देखिन्छ। त्यस्तै, यो लिंकको साथ खुशी छ जुन तपाईं एसईओ को लागी प्रयोग गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंको लिंक पुरानो मिति सक्यो र उपयोगी छैन भने, त्यसले तपाईंको एसईओलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ। कारण यो छ कि लि passes्कहरू समय बित्दै जाँदा कम यातायात प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण ताजा ट्राफिक पाउनका लागि तपाईंले कम्तिमा प्रत्येक तीन देखि छ महिनामा लिंक अपडेट गर्नुपर्नेछ। यससँग, तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा नयाँ ट्राफिक नम्बरहरू नियमित रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ जुन तपाईको पुरानो लिंकको साथ समान जनसंख्यामा निर्भर रहन्छ।
यद्यपि ती समान अवधारणाहरू देखिन्छन् तर धेरै फरक छन्। लिंक गरिएको किवर्ड वा वेबसाइटलाई हाइपरलिंक भनिन्छ।
फरक पृष्ठमा तपाईंको वेबसाइटमा लिंकलाई ब्याकलिंक भनिन्छ। सामान्यतया, हाइपरलिंक कुनै पनि वेबसाइटको लिंक हो। ब्याकलिंक तपाईंको वेबसाइटमा लिंक हो, बिभिन्न वेबसाइटमा।
ती दुबै महत्त्वपूर्ण छन् तपाईंको इच्छाको रूपमा र तिनीहरूलाई आवश्यक छ। तपाईंलाई हाइपरलिंक्सबाट तपाईंको साइटमा ट्राफिकको साथै तपाईंलाई ब्याकलिks्कहरू तपाईंको साइटमा विशेष यातायातको लागि चाहिन्छ।
तलको स्क्रीनशटहरूले तपाईंलाई त्यो प्रतीक फेला पार्न मद्दत गर्दछ:
खोज अप्टिमाइजेसनको प्रत्येक तत्वको लागि कोडिंगको ज्ञान हुनु आवश्यक छैन। उन्नत एसईओ प्रविधिहरूको लागि तपाईसँग कोडको आधारभूत ज्ञान हुनुपर्दछ, तर प्रत्येक SEO युक्तिका लागि यो आवश्यक छैन।
कम्पनीले अनुक्रमणिका वा क्रल गरेको पृष्ठहरूको बारेमा खोजी ईन्जिन जानकारी दिने पृष्ठलाई रोबोट्स। txt भनिन्छ। यो पृष्ठ YOURDOMAIN.com/ robots.txt ब्राउज गरेर फेला पार्न सकिन्छ।
साइटम्याप.एक्सएमएल फाइलमा तपाईंको वेबसाइटमा सबै पृष्ठहरूको अनुक्रमणिका समावेश छ। खोजी ईन्जीनको लागि सामग्रीलाई सन्दर्भित गर्न सजिलो बनाउँदछ जुन अनुक्रमणिका चाहिन्छ।
जब खोजी ईन्जिनहरू तपाइँको वेबसाइटको सामग्री मार्फत जान्छन्, तिनीहरूले तपाइँको वेबसाइट क्रल गर्दछन्। क्रॉल गर्दा, ती सामग्री अनुक्रमणिका छन् जुन खोज इञ्जिनमा प्रदर्शित हुन्छ। तर, तपाईंले यो याद राख्नु पर्छ कि तपाईंको सबै वेबसाइट सामग्री अनुक्रमित छैन। यो पूर्ण रूपमा खोजी ईन्जिनहरूमा निर्भर गर्दछ जुन कुन सामग्रीलाई अनुक्रमणिकामा छ र कुन क्रलिंग गर्दा अनुक्रमणिका होइन।
तपाईलाई केवल “साइट: www.YOURDOMAIN.com टाइप गर्न आवश्यक छ तपाईको साइटमा कुन पृष्ठहरू अनुक्रमणिका छन् भनेर पत्ता लगाउन।
खोज ईन्जिनहरूले छविहरू पढ्न सक्दैनन्, तर हो उनीहरू पाठ पढ्न सक्दछन्। Alt पाठ खोज ईन्जिनको साथ छविहरूको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्दछ। थप रूपमा, यदि पृष्ठ केहि मुद्दाहरूको कारण लोड भएन भने, व्यक्तिले छवि पाठको सूचना पनि जाँच्न सक्छन् Alt पाठ पढेर।
यो धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ जुन तपाइँको परिणामहरू कहिले देखिने छन् भनेर फेला पार्न मद्दत गर्दछ। यसले निम्न कारकहरू समावेश गर्दछ, तर सीमित छैन:
तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको सामग्रीको मात्रा
कसरी सामग्री तपाइँको दर्शकहरु संग प्रतिबिम्बित?
तपाइँको वेबसाइट कडा वा कमजोर डोमेन अधिकारको साथ ठूलो वा सानो छ कि छैन?
यदि तपाईंसँग ठूलो साइट छ भने, यसले सम्भावित रूपमा केही दिनहरूमा परिणामहरू देख्न सक्दछ यदि यो नियमित रूपमा खोजी ईन्जिनहरूले क्रल गरेको छ भने। यसको लागि साना साइटहरू प्रदर्शन हुन बढी समय चाहिन्छ किनभने तिनीहरू कम पटक क्रल हुने गर्दछ। तपाईंले एसईओ रणनीति परिवर्तन गर्ने योजना गर्नु अघि तपाईंले कम्तिमा एक हप्ता र सायद एक महिनाको लागि पर्खनु पर्दछ, र यदि तपाईंले एसईओको साथ भर्खर सुरु गर्नुभयो भने केही लामो।
तपाईको एसईपी गर्नको लागि आन्तरिक बाह्य कसैलाई काममा लगाउन यो सहयोगी हुन सक्छ तर यदि यो व्यक्तिलाई एसईओको आधुनिक नियमहरूको ज्ञान छैन भने यो खतरनाक हुन सक्छ।
एसईओ को लागी एक लक्ष्य सेट गर्दा, केवल फनेलको शीर्षको बारेमा सोच्नुहोस् र तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंले भ्रमण गरिरहनु भएको संख्या। जे होस्, तपाईंको पूर्ण मार्केटिंग फनेल र गुणकारी ट्राफिकको बारेमा सोच्नुहोस् तपाईंको वेबसाइटमा आउँदैछ।
जाँच गर्नुहोस् कि एसईओ मार्फत तपाईंको वेबसाइट खोजी गर्ने व्यक्तिहरूले तपाईंको व्यवसायको लागि योग्य सम्भाव्य छन् कि छैनन्। यदि त्यहाँ छैन भने, यस प्रकारको ट्राफिक तपाईंको वेबसाइटको लागि फरक पर्दैन।
तपाइँका लक्ष्यहरू सिर्जना गर्दा, सामान्य ट्राफिक र गुणस्तर ट्राफिक बीचको भिन्नतालाई विचार गर्नुहोस्। त्यसो भए ट्राफिक र तपाईंको पूर्ण मार्केटिंग फनेलमा आधारित लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस्।
हो यो धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ! तसर्थ, तपाईंले आफ्नो वेबसाइट SEO गर्न सही तरीकाले अपडेट गर्न आवश्यक छ।
त्यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् जुन तपाईसँग हुन सक्छ वा अब SEO बारे सोध्न डराउँछन्। के तपाइँसँग SEO संग सम्बन्धित अरु कुनै प्रश्नहरू छन् जुन तपाइँले सोध्नुपर्ला भनेर डराउनुहुन्छ? तपाईं तिनीहरूलाई टिप्पणीहरूमा साझा गर्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईंको लागि जवाफ दिनेछौं।
<<7Steps to Prevent directory listing using .htaccess शीर्ष १ W तरीकाहरू तपाइँको वेबसाइटलाई अधिक विश्वसनीय र मनाउने बनाउने >>